Mifandraisa amin'ny Spam Bots
Talata, Oktobra 26, 2010 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Nick carter
Ny anti-spam dia lohahevitra goavambe amin'ny mailaka. Ny olona dia niezaka nanadio ny boaty fampidirana azy nandritra ny taona maro tamin'ny zava-drehetra tsy mahasosotra spamarrest fitaovana fanivanana junk-mail tsotra miaraka amin'ny fahaizany manaitaitra diso-positives. Raha ny marina dia nanjary fanelingelenana ny spam mailaka ka niditra an-tsehatra mihitsy aza ny governemanta (sary an-tsaina izany) ary nanoratra lalàna momba izany. Saingy misy endrika iray amin'ny spam izay mbola anjaran'ny mpiambina hisambotra… ary manantena aho fa hanampy ahy ianao.
Nahasosotra fotsiny izany, saingy nitombo hatrany amin'ny fahatapahan'ny asa aman-draharaha rehetra. Ny fandefasana endrika rehetra dia mitarika fitarika eo amin'ny CRM-ko. Midika izany fa nandritra ny herintaona lasa izay dia nanana firaka mitarika be dia be amidy amin'ny orinasa SEO aho izay afaka mahazo ahy amin'ny pejy 1 amin'ny Google. Noho izany, nikasa ny hamorona formler mpikarakara labiera ao an-trano aho izay hanomboka hamantatra sy hanafoana ireo spamme ratsy ireo TSY MISY atahorana ho diso fiheverana diso. Satria, rehefa dinihina tokoa, na dia mankahala spam aza aho, dia vao mainka halako ny fotoana very.
Ho fanombohana dia nandraho ireo karazana spam izay azoko atao ny manary hatramin'ny sokajy roa:
Ilay tena olombelona izay mandefa angona diso mba hahatongavana ao amin'ilay cookie ao ambadiky ny endrika… ny fitsarana tsy andoavam-bola, ny taratasy fotsy maimaim-poana, ny marketing marketing afa-po, sns.
Ireo botika mandady ny tranonkala mandefa rohy afiliana sy angona diso amin'ny endriny rehetra mety ho hitany.
Ary koa, ho ampahany amin'ity tetikasa fiaraha-miasa kely ity (izay azonao ampidirina amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra eto) dia avelao aho hanampy ity masontsivana manaraka ity: TSY CAPTCHA. Tsy azoko atao ny mamaky ireo zava-doza amiko antsasaky ny fotoana ary misy antony tokony hatahorana fa ny CAPTCHA mihitsy no mampihena ny fiovam-po amin'ny alàlan'ny sarotra fotsiny.
Noho izany, ny tetika dia ny famoronana andiana fitsapana lozika izay ahafahan'ny olona iray mihazakazaka ny rakitra natolotra izay hamantatra tsara ny spam isan-jato isan-jato amin'ny fotoana nefa saika tsy manakana ny fitarihana ara-dalàna mihitsy.
Eto no misy ahy:
Ampidiro ao anaty endrika ilay karazana, type = text, fa style = ”display: none;”. Ny botika dia hampiditra sanda voajanahary ao anatin'ny saha fidiran'ny lahatsoratra amin'ny ezaka hialana amin'ny zana-kazo takiana. Na izany aza, raha toa ka tokony hapetraka miaraka amin'ireo angon-drakitra ity saha manokana ity, dia azontsika atao tsara ny mahafantatra fa tsy nanao izany ny olombelona.
Zahao hoe "asdf." Tsotra, fantatro, fa ny tatitra momba ny spam manan-tantara dia nampiseho fa endrika fandefasana diso ity malaza ity. Raha miseho amin'ny sehatra rehetra ny asdf string, dia spam izany.
Zahao ireo tarehin-tsoratra miverimberina. Nanandrana aho ary nanandrana, fa tsy afaka nieritreritra antony ara-dalàna tokony hamerenan'ny toetra amam-panahy mihoatra ny in-3 amin'ny anarana, anaran'ny orinasa na adiresy. Raha maharesy lahatra ahy ianao raha tsy izany dia tsara. Raha ny amin'izao fotoana izao, ny "XXXX Consulting Company" dia tsy ho hitarika ahy.
Zahao ireo tadiny mitovy. Ankoatry ny mpifanila vodirindrina amin'i Tim Allen, Wilson Wilson, tsy misy olona fantatro manana lanja mitovy tadiavina amin'ny sehatry ny fifandraisana rehetra. Raha toa ka maro ny saha, mitovy ny spam.
Ary farany, ary izao no lakilen'ny: zahao ny toerana tsy misy azy ireo URL. Iray amin'ireo tranga malaza indrindra amin'ny spam ny mametraka URL ao anaty saha tsy anisany. Ivelan'ny boaty "hafatra" eo amin'ny faritra an-tsoratra, ny URL dia tsy tokony hampiasaina amin'ny anaran'ny olona, ​​nomeraon-telefaona, anaran'ny orinasa, na raha tsy izany. Raha manandrana izy ireo dia spam.
Ireo fitsapana lozika 5 ireo dia nampihena ny fandefasana spam maherin'ny 70% tao anatin'ny iray volana lasa izay endrika fifandraisana malalaka vokatra. Tiako ho avo kokoa io tarehimarika io. Ny isan'ny lehibe indrindra amin'ny fandefasana spam izay mbola mitsoaka dia ny tolotra SEO ratsy laza. Ireto ny fanamby manaraka: azonao atao ve ny manisy andian-teny manan-danja sy tokonam-baravarana hamaritana izay milaza fa ny atin'ny fandefasana dia miresaka momba ny SEO? Mazava ho azy, mety ho hevitra ratsy ho an'ny tovolahy ao amin'ny SlingShot ity raha hampihatra amin'ny tranokalan'izy ireo, fa ho antsika sisa dia mety izany.
Mivondrona ireo mpandrindra tranonkala: inona koa no tokony hosedraina?
Tags: botsspam form formmamorona spamamin'ny spam
26 Okt 2010 amin'ny 3:59 PM
Tena tiako ny hevitra manampy saha misy display:none. Fahendrena izany! Nanoratra lahatsoratra aho volana maro lasa izay momba ny haitao ny teknolojia Captcha… manasazy ny tsy manan-tsiny ary manampy dingana fanampiny tsy ilaina ho an'ny mpampiasa. Izy io dia mifanohitra amin'ny traikefan'ny mpampiasa. Mety hitsapa ny saha miafinao aho!
26 Okt 2010 amin'ny 4:00 PM
27 Oktobra 2010 à 5:06
Tena miasa tsara izy io, fa raha avoakanao amin'ny endrika efa misy dia mety ho elaela vao hivoatra ny vokany. Matetika ny bots no mitahiry ny endrikao ary mandefa azy io araka ny fahitany azy herinandro lasa izay mandra-piveriny sy hahita azy indray. Noho izany, raha mbola mandefa amin'ny endrika cache-nao izy ireo dia ho afaka. Ao anatin'ny iray volana eo ho eo dia tokony hanomboka hahita vokatra ianao.
Janoary 10, 2011 amin'ny 8:38 PM
2. Sarotra ny maminavina ny anaran'ny saha;
3. fanamarinana endrika amin'ny lafiny server;
4. saha endrika tsy antenaina hanana sanda;
#1 no tiako indrindra. Manomboha fameram-potoana raha vantany vao voapetraka ny pejy fifandraisana (na pejy rehetra). Eo amin'ny lafiny mpizara dia mametraka fotoana andrasana hamenoana ny taratasy. Raha apetraka haingana loatra, ny mpampiasa dia hahita hafatra/kaonty kilemaina/admin mahazo mailaka/sns. Ity iray ity dia manafoana ny 99.9% amin'ny karazana hetsika bot rehetra.
#2 mitahiry anarana saha ao anaty session ary omeo anarana kisendrasendra ny saha. Manasarotra ny fianarana bot.
#3 ity dia zava-dehibe. Ny mailaka dia azo hamarinina amin'ny fomba marina tsara amin'ny fomba fiteny mahazatra, ny saha nomeraon-telefaona dia tokony ahitana isa 10, saha 2 na maromaro miaraka amin'ny sanda mitovy = bot, sns.
#4 nohazavaina ao amin'ny lahatsoratrao, 5 sy 6 safidy script sasany.
Apr 25, 2012 amin'ny 8: 36 AM
Misaotra tamin'ny hafatra, Nick. Mankasitraka ny anjara.
Martin - Heveriko fa hevitra tsara ny fameram-potoana. Heveriko fa misy bot iray hamakivaky azy ary somary ambany ny tokonam-baravarana… mety 5 segondra? Manontany tena aho noho ny endrika efa feno ho an'ireo mpampiasa tena izy ary koa ireo mpampiasa izay miverina amin'ny pejy ary mahafantatra avy hatrany fa te hameno ilay taratasy izy ireo. ny volako roa ihany. Fantatro fa tara herintaona eo ho eo amin'ity lahatsoratra ity aho ka tsy manantena valiny firy, mametraka izany ao anaty fanantenana 🙂